Faritra ora - Wikipedia
Ny Faritra ora dia faritany iray manana ora iray. Ny ora anatin'io faritany io dia tsy maintsy mitovy daholo.
I Sir Sanford Fleming no nanome an'io sistema io taminy taona 1876, ary ny meridianina ny Greenwich ny repère'ny. Misy faritra ora 24 era-ntany ... tokony hitovy angeda izy ireo, raha tsy mitovy angeda izy anatiny fipetran'javatra : Ny Sina izao manana faritra ora iray ihany, kanefa tokony manana faritra ora telo izy. Ny dika ny izany dia manaraka ny faritany-pirenena koa ny ora.
Ny Meridianina manana zoro filo nà 15° (~1.666 km) eo aminy Fehibe. Io faritra io mandeha makany pôle Nord mihidina makany Pôle Sud, Ny meridianina fotony (O° ; GMT) dia eo aminy tanànan'i Greenwich, any Londres.
Faritra Ora[hanova | hanova ny fango]
Los Angeles, [Etazonia]](UTC-8) : 04:00
New York, Etazonia (UTC-5) : 07:00
Saint-Jean, Kanada (UTC-4) : 08:00
Stockholm, Soedy (UTC+1) : 13:00
Le Cap, Afrika Antsimo UTC+2) : 14:00
Mysore, Indy (UTC+5:30) : 17:30
Katmandou, Nepaly (UTC+5:45) : 17:45
Séoul, Korea Antsimo (UTC+9) : 21:00
Melbourne, Aostralia (UTC+10) : 22:00
Mampiasa faritra ora 42 (na faritra ora 42) ny firenena eto an'tany, (tsy faritra ora ofisialy ny faritra oa GMT+8:45) ; Misy faritra ora 37 miasa mandritrin'taona, Misy faritra ora roa anaty ny ririnina Bôrealy (GMT-3:30 sy GMT+ 3:30), dia iray ihany rehefa ririnina Aostraly (GMT+12:45) dia misy anaky iray aminy ora-pahavaratra bôrealy (GMT-2:30) dia iray aminy ora-pahabaratra aostraly (GMT+13:45)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Faritra_ora&oldid=175565"
Voaova farany tamin'ny 21 Jiona 2011 amin'ny 18:20 ity pejy ity.